Iintsuku zaseAnna Bay /eBirubi Beach - I-Airbnb
Iintsuku zaseAnna Bay /eBirubi Beach
Ukukhangela indawo yokuhlala, indawo yokusebenzela ekhaya, kwenye indawo ethe cwaka, kude nezihlwele kwaye kufutshane nolwandle lwentsapho yakho (ukulala 7) - iflethi yethu, enesantya esikhawulezayo seintanethi, yeyona ifanelekileyo.
Iflethi okanye indlu yethu ekwicomplex enamagumbi okulala ayi-3 (phezulu) ilungiswe ngokupheleleyo ibe yenzelwe ukuba abantu bathi zava baze baphumle xa bezonwabisa elwandle. Nangona singabonakali kakuhle elwandle, sihamba nje imizuzu eyi-3 ukuya eBirubi Beach entle.
Ekubeni itshintshwe yayindawo evulekileyo yokuceba indlela yokuphila, ngoku iflethi yethu iyindawo ekhanyayo neqaqambileyo. Zonke izinto zebhedi ziyafumaneka ngaphandle kweetawuli zaselwandle.
Sinendawo yethu yokungena yabucala kunye nezitepsi kwaye izinto ezipheleleyo zimi ngolu hlobo lulandelayo:
Ikhitshi elinento yonke kwaye liquka ifriji yomnyango waseFransi/i-freezer, indawo yokuphekela yombane, ioveni kunye ne-hood, i-microwave kunye nomatshini wokuhlamba izitya. Izinto ezibalulekileyo zokupheka ziquka isidlo sangokuhlwa esiyi-8, izinto zeglasi, into yokufraya yombane, iketile, i-toaster, i-coffee plunger, into yokupholisa amanzi, izinto zokupheka nezokupheka, into yokupheka ecothayo, iisosi nezitya zeplastiki.
Ibhari yesidlo sakusasa kunye nesitulo sesitulo.
Umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu.
Vula indawo yokuhlala yesicwangciso enegumbi lokuphumla elinomnyango ophumela ngaphandle onamavili, itafile enkulu yekofu, iTV enkulu kunye ne-DVD Player.
Funda i-Nook ngedesika, isitulo, itreyi ye-laptop, ikhibhodi, itshaja ye-nook kunye nemidlalo yabantu abadala, iincwadi kunye nee-DVD.
Isitulo esiphakamileyo kunye negeyithi yokhuseleko/indawo yokudlala ziyafumaneka.
Sinee-wardrobes ezenza kube lula ukubonelela ngendawo engakumbi kwiibhedi ezinkulu kumagumbi okulala amabini, ibe enye inebhedi enye engasentla neneebhedi ezimbini ezantsi. Onke amagumbi okulala anezinto ezininzi zokugcina kunye neehengari zokuxhoma iibhatyi.
Zonke iibhedi ngaphandle komntu omnye zinomatrasi owenza uzive uthe zava. Iminyango, imiqamelo, izinto zokogquma ibhedi namashiti zifakwa kunye neetawuli zokuhlamba (nceda uziphathele ezakho iitawuli zaselwandle). Sikwabonelela nangezinye izinto zebhedi ukuze ziphole ngezo ntsuku zasebusika neentsuku ezipholileyo.
Indawo yokuhlamba impahla enomatshini wokuhlamba impahla ongaphambili, umatshini wokomisa impahla nebhafu, iayini nebhodi yokuayinela ezimeleyo.
Indawo engasemva enendawo yokubraya neyokuhlala phandle.
Yahlula igumbi lokuhlambela ngokukhupha ulophu nesibhakabhaka nendawo yokugcina izinto ezininzi. Iquka isixhobo sokomisa iinwele nebhasikiti yeempahla ezimdaka.
Ezantsi kwezitepsi kukho indawo enkulu yokugcina izinto kwiiklabhu zakho zegalufa, ibhodi yokusefa, iibhayisekile.
Kukho indawo yokupaka imoto eyi-1 esesitratweni nenendawo eninzi yokupaka esitratweni.
4.81 · Izimvo eziyi-176
IBirubi Beach inendawo yokudlala yabantwana, iSkate Park kunye ne-BBQ kunye neCrest Birubi Café Restaurant kwiBirubi Point Surf Club, eyindawo ethandwayo yokutya isidlo sakusasa nesasemini. IBirubi Beach inemingxunya epholileyo yokuqubha kunye namathuba okubhukuda kwindawo epholileyo kunye nendawo yokusefa ethandwayo. Meyi-Julayi kunye noSeptemba-Oktobha yindawo ethandwayo yokubukela iminenga kunye nokukhenketha okuqhelekileyo kweenkamela okuya eBirubi Beach.
Ukuze ufumane i-scuba diver enkulu, indawo ethandwayo yiFishermans Bay, yimizuzu eyi-5 xa uhamba ngesithuthi ngaselunxwemeni.
Ukuhambahamba imizuzu eyi-10 kuza kuba nawe kwiivenkile zaseAnna Bay kunye neSupermarket, iNewsagent, iPost Office, iTavern, Iivenkile Zeebhotile, iRubi Blue Restaurant, iThai Restaurant, iTakeaway, iCafé yaseItaly, iSikhululo Seenkonzo, Iziko Lezonyango kunye neChemist.
Indawo yasePort Stephens inezinto ezininzi ezenza abakhenkethi babe nomtsalane ibe yeyona ikufutshane:
Ukhenketho lweeSandboarding kunye neQuad Bike kwiinduli ezisemva kolwandle iBirubi/Stockton
Uhambo lokukhwela inkamela
uDavid Grahams Golf Work Centre
Kukho neendawo ezintle zokudlala igalufa eSalamander Bay, eFingal Bay naseMedowie
I-Tomaree National Park inamathuba amaninzi okuhamba/okunyuka intaba
Jonga iFlethi okanye indlu ekwicomplex ukuze ufumane amacebiso apheleleyo
Avid traveller always looking for the next adventure.
Zonke iiyure zingena ngebhokisi enesitshixo ebethelelwe kufutshane nomnyango ongaphambili. Kukho isixhobo sokulayita izibane (sibaleka kangangemizuzu eyi-8) ngaphandle komnyango wangaphambili ukuze kukhuseleke ukungena kule ndlu.
Sifumaneka nanini na ngefowuni yethu ukuba unemibuzo okanye izinto ezikuxhalabisayo. Inombolo yethu iza kunikwa imiyalelo yokubhalisa xa ufika.
Zonke iiyure zingena ngebhokisi enesitshixo ebethelelwe kufutshane nomnyango ongaphambili. Kukho isixhobo sokulayita izibane (sibaleka kangangemizuzu eyi-8) ngaphandle komnyango w…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-11406-2